Vabereki Vangu Havandivimbi | Vari Kuyaruka
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Moore Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Funga nezveizvi: Pane zvose zvaunoita, pane zvaunoita here zvingaita kuti vabereki vako vasakuvimba?
Somuenzaniso, muapostora Pauro akanyora kuti: “ Tinoda kuva vakatendeseka muzvinhu zvose. ” (VaHebheru 13:18) Zvibvunze kuti, ‘Kana pava panyaya yokutaura kwandanga ndiri uye zvandanga ndichiita, vabereki vangu vanondiziva somunhu anobuda pachena here?’
“ Ndainyorerana mae-mail nemumwe mukomana wandaida asi vabereki vangu vakanga vasingazvizivi. Pavakazozviziva, vakandirambidza kutumirana naye mameseji. Ndakaita sendazvinzwa, asi takaramba tichitumirana mameseji. Izvi takazviita kwegore rose. Ndaitumirana nemukomana uyu mameseji, vabereki vangu pavaindibata ndaibva ndakumbira ruregerero ndovaudza kuti handichazvipamhi asi nerweseri totangazve kutumirana mameseji. Ndakazosvika pokuti vabereki vangu vakanga vasingachavimbi neni! ”
Unofunga kuti nei vabereki vaLori vakanga vasingachavimbi naye?
Kudai waiva mubereki waLori, waizodai wakaita sei, uye nei waizodaro?
Zvii zvine musoro zvingadai zvakaitwa naLori pashure pekunge ataura nevabereki vake nezvenyaya iyi?
“ Vabereki vangu vakanga vasingandivimbi panyaya dzevakomana, asi iye zvino ndava kuzvinzwisisa kuti sei vaidaro. Ndaipedza nguva yakawanda ndine vakomana avo vaiva vakuru kwandiri nemakore maviri. Ndaipedza nguva yakawanda ndiri pafoni ndichitaura navo, uye pataiita mapati vakomana ivavo ndivo vandaiita tsika nditsike. Vabereki vangu vakanditorera foni kwemwedzi, uye vaisandibvumira kuenda kunzvimbo dzaienda vakomana ivavo. ”
Kudai waiva mubereki waBeverly, waizodai wakaita sei, uye nei waizodaro?
Unofungidzira kuti zvakaitwa nevabereki vaBeverly zvakanga zvakanaka here? Nei uchidaro?
Zvii zvingadai zvakaitwa naBeverly kuti vabereki vake vatangezve kumuvimba?
Zvaungaita Kuti Vabereki Vako Vakuvimbe
Kubva pahuhwana kuenda pakuva munhu mukuru anovimbwa naye kwakafanana nekukwira masitepisi
Chokutanga, ona kuti chii chawakaita chakaita kuti vabereki vako vasakuvimba.
Kusvika pamba nenguva dzandinotarisirwa kuti ndinge ndavapo
Kuita zvandinenge ndati ndichaita
Kuita zvinhu nenguva
Kugona kushandisa mari
Kupedza mabasa epamba
Kumuka panguva yandinenge ndanzi ndimuke
Kugara mumba mangu makachena
Kushandisa foni kana kuti kombiyuta zvine mwero
Kubvuma mhosva uye kukumbira ruregerero
Chechipiri, tsidza mumwoyo mako kuita zvawataura pamusoro apa kuti uratidze kuti wakavimbika. Ita zvinotaurwa neBhaibheri pano: ‘ Bvisa unhu hwekare hunoenderana nowaimbova mufambiro wako. ’ (VaEfeso 4:22) Nekufamba kwenguva, munhu wose, kusanganisira vabereki vako, vachaona zvakanaka zvauri kuita.—1 Timoti 4:15.
Chechitatu, taura nevabereki vako pamusoro pezvawatsidza kuita. Panzvimbo pokuti ugunun’une uchiti vabereki vako havasi kuvimba newe, vabvunze neruremekedzo kuti ndezvipi zvaunofanira kuita kuti vakuvimbe.
Nyevero: Usatarisira kuti vabereki vako vabve vangobvuma ipapo ipapo zvauri kuda nokuti vanoda kuva nechokwadi chokuti uchaita zvaunenge wataura kuti uchaita. Shandisa mukana uyu kuti uratidze kuti unoita zvaunenge wataura. Nekufamba kwenguva, vabereki vako vachawedzera kukuvimba uye kukupa rusununguko. Izvi ndizvo zvakaitika kuna Beverly, ambotaurwa nezvake. Anoti: “Hazvisi nyore kuti uite zvinhu zvinoita kuti vabereki vakuvimbe pashure pokunge wamboita misikanzwa. Iye zvino vabereki vangu vava kuvimba neni, uye ndinonzwa kufara!”
Chinhu chinokosha: Ukagara uchiita zvinhu zvakatwasuka zvichaita kuti vanhu vawedzere kukuvimba.